Ukuze ibe nempilo, une ukuthutha! Kuyinto Axiom ezidinga kungekho ubufakazi. ukunyakaza Active bayatfutfuka amaqembu ezinkulu muscle, ukwandisa kuyaqina we nemisipha futhi ukuhamba ngokuhlanganyela, ukwandisa nekusebenta inhliziyo. Kuthuthukisa igazi ukugeleza zonke kwezitho nezicubu zomzimba, inyuka umthamo esibalulekile, ahlanganiswe igazi elingenawo umoya, ngaleyo ndlela ngenkuthalo uqhubeke zonke izinhlobo umzimba.
imfundo Lokuhlala enkulisa enezinto eziningi izici. Okokuqala, kumelwe singakhohlwa ukuthi kuyaqondakala izingane, elula futhi ezithakazelisayo ekulungiseleleni umzimba kwakwakhe. Shintsha izakhiwo ezinjalo kuyadingeka ukuze hhayi ngaphansi kuka kanye njalo emavikini amabili.
Okwesibili, imisebenzi ngokomzimba kumele qiniseka alternate nge Iminako yezinto onokuthula imidlalo, ukuze umntwana usuke engakabi ekhathele.
High-grade imfundo ngokomzimba lezingane zasenkulisa futhi Kunzima ukucabanga ngaphandle imidlalo mobile. Othisha ukuncoma umuntu esemncane kakhulu ukwethula izingane kwezemidlalo ithimba imidlalo. Abenzi kuphela ukuthuthukisa ijubane yokusabela, amandla, kodwa futhi elizomsiza afunde nokuxhumana nokuqonda mutual kuleli qembu.
Okwamanje, izitolo ezemidlalo ukunikeza ezahlukahlukene umzimba ezingasiza ukufeza imfundo ngokomzimba zasenkulisa izingane. Kodwa musa ukusheshe ukuthola ezinye "fancy" Umqeqeshi noma eziyinkimbinkimbi ezemidlalo. Ekuqaleni, izinto ingane ulula futhi ajwayelekile kusuka ebuntwaneni yabo: ibhola, intambo, ayindilinga, induku Gymnastic.
Qinisa emnyango bar, umbhede ngaphansi umantilasi Foam - futhi imishini ezemidlalo ngomumo. Hang kusuka indandatho pole, lapha ukubophela intambo - nokuthi ingane yakho kakade owns siqu mini-ejimini yayo, okuyinto cishe akazange zenzeke, kodwa ivumela ingane ukukhuphuka, jika, ulahlekelwe ngokweqile phezu amandla yezingane.
Uhlelo Ezemfundo zasenkulisa izingane enkulisa ihlezi ifakiwe umzimba ekuseni, njengoba indlela esisemqoka accustom izingane kusukela zisencane ukuqeqeshwa ngokomzimba. Baqhuba amakilasi okufundisa ochwepheshe, ukwenza abantwana zeselula namahloni ngisho kancane ukuhambisa ngenkuthalo, ukuthola ophethe vivacity usuku lonke.
Ukuziphatha umzimba ku nesidingo sabo, yebo, ngokuhambisana nemithetho, okuncike imfundo ngokomzimba zasenkulisa izingane.
1.Nachinayte amakilasi nge ukunyakaza ilula futhi kulula, kancane kancane kokudlulela eziyinkimbinkimbi nezinzima kakhulu, kancane kancane usheshisa ijubane kanye nesikhathi.
2. Uma kungenzeka, umthwalo kumele zithole zonke lezi zinhlangano eziyizikhondlakhondla kwemisipha - izingalo kanye nebhande ehlombe, isiqu, imilenze ukhalo, nge ukwenyuka kancane ezahlukene motion.
3. Ngesikhathi ukuqeqesha ukuphefumula wengane kufanele ibe bushelelezi, ezijulile futhi onesigqi. Uma ukuphefumula yaboshelwa isidingo ukunciphisa umthwalo noma ukubambezela yonke ijubane.
4. Ukushaja kumele iqedwe futhi aqukethe 8-10 umzimba, okuyinto akhethiwe kuye ngokuthi yobudala kwengane.
5. Ngezikhathi zasehlobo, imfundo ngokomzimba zasenkulisa nezingane arcade kwenziwa ngaphandle futhi kubanda - egumbini kahle umoya. Ngakho egazini uthola umoya-mpilo owengeziwe, ngesivinini ukususwa imikhiqizo umzimba.
6. Ngo-i ukushaja enhle kumele igcine amanzi ukwelashwa (douche, douche, zibhukuda echibini noma emfuleni).
Ukuze bahlele kahle ukuqeqeshwa ngokomzimba ngomntwana, kumelwe sikhumbule ukuthi sempumelelo kule bhizinisi - njalo. Ngokwesibonelo, ngokuvivinya umzimba njalo, njengokuhamba usheshe noma ngebhayisikili, okufanele kungene imizuzu okungenani engu-30. Zama uyifake ku le ngane umkhuba, kuyoba nesandla ekuthuthukiseni ukuqeqeshwa kwabo ngokomzimba.
Ukudla acetone e ingane: imenyu ukuthi can futhi awukwazi